သက်တန့်ချို: ကျွန်တော်နှင့်ဟောက်ဆာဂျင် ဘ၀ (အပိုင်း ၇ )
ဟောက်ဆာဂျင်ဘ၀ အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ရေးလာတာ အခုဆိုရင် အပိုင်း ( ၇ ) ကို ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ ။ ချွေးသံ တရဲရဲ ပင်ပန်းနွမ်းခွေပြီး ငေါင်တောင်တောင်ဖြစ်ရတဲ့ ဟောက်ဆာဂျင်ဘ၀မှာ ဂျူတီကုတ်ဖြူဖြူလေးကို ၀တ် နားကြပ်လေးကို ခပ်တည်တည်ချိတ်ပြီး လူလုံးပြလိုက်မဟဲ့ ဆိုတာဟာ တကယ်တော့ စိတ်ကူးထဲမှာတင် ဖျက်ကနဲ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ် ။ အရင်ဆုံး အိုဂျီ ပို့စ်တင် ဆင်းတုန်းက အကြောင်းလေး တစ်ခုကနေ စပြီးပြောချင်ပါတယ် ။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို ဘယ်သူ့ကို ပြန်ပြောပြော မယုံကြဘူးခင်ဗျ ။ အေးလေ ယုံချင်စ ရာလည်း ကောင်းမှ မကောင်းပဲကိုး ။ ထုံးစံအတိုင်း အိုဂျီ ၃လမှာ ဟော တစ်ယောက်မွေး လိုက် ဟောတစ်ယောက် ခွဲလိုက်နဲ့ တယ်လည်း ပင်ပန်းခဲ့တာကိုး ။ အဲဒီတုန်းက မှတ်မှတ်ရရ မိုးကလည်း သည်းနေတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ Night Duty ကျတဲ့ ညပေါ့ ။ ညနေတုန်းက တည်းက မွေးလိုက် တဲ့လူနာတွေ ဟောတစ်ယောက် ဟောတစ်ယောက် အော်... အမျိုးသမီးတွေ တယ်လည်း မွေးနိုင်ကြ တာပဲလို့ တွေး မိသေးတယ် ။ ( အေးလေ အမျိုးသားတွေက မွေးလို့မှမရပဲကိုး )
ဒါနဲ့ မိုးစိမ့်စိမ့်အေးတဲ့ ညအချိန်အခါ သန်းခေါင်ယံ တစ်နာရီလောက်မှာ “ ဆရာတို့ ဆရာတို့ NA လာတယ် ” ဆိုတဲ့နာ့စ် ရဲ့အသံကိုကြားလိုက်ရပါတယ် ။ ( NA- New Attendance လူနာအသစ်) ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ ကငါးယောက်ပါ ။ ယောင်္ကျားလေး သုံးယောက် မိန်းကလေး နှစ်ယောက် ။ ၂ ယောက်တစ်တွဲစီ အလှည့် ကျလို့ တိုင်ပင်ထားပြီးသားပါ ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်နဲ့ ဟို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဂျပု ( သိတယ်ဟုတ် သူ့အကြောင်းတွေ ကို အရင်အပိုင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပြီးသားပါ ) တို့ရဲ့ အလှည့်ဆိုတော့ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ သွားကြည့်ကြပါတယ် ။ လူနာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် နေ့စေ့လစေ့ Fit (တက်ခြင်း ) နဲ့လာတာပါ ။ Pressure တိုင်းကြည့်တော့ 220/110 mmHg အဖြေကို သိလိုက်ရပါပြီ ။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တတ်တယ်ဆိုပါတော့ ။ ဆေးပညာ အရတော့ Eclampsia လို့ခေါ်ပါတယ် ။ အရမ်းကိုအ န္တရာယ်များတဲ့အခြေအနေပါပဲ ။ ဒါနဲ့ AS တွေ FA တွေကို အကြောင်းကြားပြီး လိုအပ်သလို ကုသမှုတွေပေးကြရပါတယ် ။ (AS - လက်ထောက်ဆရာဝန် ၊ FA- ပထမလက်ထောက်ဆရာဝန် ) အဲဒီအချိန်မှာ ၀ုန်းဒိုင်းကျဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် ကျန်တဲ့ ဟောက် ဆာဂျင် ၃ ယောက်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ကိုကူဖို့ရောက်လာပါပြီ ။ ဒီလိုနဲ့ လိုအပ်တဲ့ drip တွေချိတ် ဆေးတွေ တိုက် ဆေးတွေထိုး လုပ်လိုက်တာ လူနာက အတော်လေးငြိမ်ကျသွားပါတယ် ။
စစ ရောက်တုန်းကစရင် သတိလစ် ရုန်းကန် နေလို့ ခြေတွေလက်တွေကို ကုတင်တိုင်တွေနဲ့ ချည်ထားရတဲံ အခြေအနေ ပါ ။ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေလိုက်တာ မနက် လေးနာရီလောက်အထိ အားလုံးက Stable ပါပဲ ။ ကျွန်တော်တို့လည်း ဘယ်အချိန်ထဖောက်မလဲ စိုးရိမ်တကြီး အခြေအနေနဲ့ပေါ့ ။ လေးနာရီခွဲလောက် ကျတော့ ကျွန်တော် တို့ငါးယောက်ရယ် AS ရယ် FA ရယ် နာ့စ်ရယ် တာဝန်ကျအ ခန်းထဲမှာထိုင်ပြီး စကားပြောနေ ကြပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ဂျပုက ဗိုက်ဆာလာတာကြောင့် FA ဆီမှာခွင့်တောင်းပြီး သက်သာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ထွက်ခဲ့ကြပါတယ် ။ “ သိပ်မကြာစေနဲ့နော် ငါးခွဲ OT ၀င်ရမယ် ” လို့ AS အစ်မ က လှမ်းပြောခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ပေါ့ဆိမ့်လေးမှာ ရေနွေးကြမ်းလေးသောက်ပြီး ဗိုက်ဖြည့်နေ တုန်း ကျွန်တော်ကိုယ့်မျက်လုံးကိုယ်မယုံနိုင်ဖြစ်သွားရတယ် ။
“ ဟေ့ကောင် ဟိုဖက်ဝိုင်းမှာ ထိုင်နေတာ ညက အီကလမ်းစီးယားနဲ့ရောက်လာတဲ့လူနာမဟုတ်လား ” “ အေးဟ ဘယ်လို လုပ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်နေတာလဲ သက်သာသွားလို့လား ” ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်း မနေနိုင်လို့ လှမ်းမေး လိုက်ပါတယ် ။ “ ဗျို့ အစ်မကြီး ညက တက်ပြီး ရောက်လာတဲ့တစ်ယောက်မဟုတ်လား ” “ ဟုတ်ပါ တယ် ဆရာလေး ဗိုက်ဆာလို့ခွင့်တောင်းပြီးမုန့်လာစားတာပါ ” အဲဒီကတည်းက ကျွန်တော် တို့ နှစ်ယောက်ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်ပြီး နည်းနည်းမသင်္ကာလည်းဖြစ်သွားတယ် ။ သူထိုင်နေတဲ့နေ ရာက မှောင် ရိပ်နည်းနည်း ကျတဲ့အစွန်ထောင့်စားပွဲမှာပါ ။ “ အင်းအင်း မြန်မြန်ပြန်နော် အချိန်မရွေးအန္တရာယ် ရှိတယ်အစ်မကြီး ” “ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာလေး ” ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့လည်း သုတ်သုတ်လေးသောက်ပြီး OG ward ထဲ ၀င်ခဲ့ကြတယ် ။ ၀င်ဝင်ခြင်း မွေးခန်းရှေ့မှာ ငိုနေကြတာကြောင့် တစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုတာ သိလိုက်ရတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ AS ကို မေးကြည့်လိုက်တော့ “ အင်း.. ညက fit နဲ့ရောကလာတဲ့ တစ်ယောက်အခုလေးတင် expire ဖြစ်သွားပြီ haemorrhage ရသွားပုံရတယ် ကလေးကတော့ FHS လည်းမရတော့ဘူး စလာကတည်းက faith ဖြစ်နေတာ FA ကတော့လူနာတွေကိုရှင်းပြနေတယ် ”
ဘုရား...ဘုရား ကိုယ့်နားကိုယ်တောင်မယုံနိုင်အောင်ပဲ ကြက်သေသေသွားမိတယ် ။ စိတ်လည်း တကယ် မကောင်းဘူး ရင်ထဲဆို့နင့်သွားတယ် ။ တစ်ညလုံး ကိုယ်တွေနဲ့ သူ တိုက်ပွဲ ၀င်ထားရတာ သေမင်းနဲ့ အခုတော့ သေ မင်း က အနိုင်ရသွားတယ် ။ အမှန်တော့ လူနာက သွေး တိုးရှိလို့ AN visit လာတုန်း က ဆေးရုံ ကို စောစောတက်ဖို့ ရက်ချိန်းပေးထားတဲ့လူနာပါ ။ အဲဒါကို မလာပဲ အခုလို မရှူနိုင်မကယ်နိုင် ကိုယ်ဝန်ဆိပ် တက်မှ ဆေးရုံရောက် Pressure တအားများပြီး expire ဖြစ်သွားရခြင်းပါ ။ ကျွန်တော်နဲ့ ဂျပု တစ်ယောက် မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ် ။အတွေးထဲမှာတော့မေး ခွန်းတွေကိုယ် စီနဲ့ . . . . . .
၁ ။ ဒါဆို ခုနက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ လူနာက ဘယ်သူလဲ ?
၂ ။ သေဆုံးသွားချိန်မှာ ၀ိဥာဉ်အနေနဲ့ သူပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန် ၂ယောက်ကို လာရောက်နှုတ် ဆက်ခြင်း လား ?
၃ ။ ဒီလို ကိုယ်ထင်ပြပြီး မယုံနိုင်စရာအဖြစ်အပျက်ကို သင်တို့ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့ရင်ယုံမှာလား ?
ကျွန်တော်ကတော့ ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကို မေးကြည့်တော့လည်း “ ဆရာတို့ ထွက်သွား ပြီး ခဏကြာတော့ ပိုက်ဆံရှင်းပြီး ဆရာတို့ ၂ ယောက်နောက် ကနေ OG ward ထဲဝင်သွားတာပဲ ” တဲ့ ။ အဲဒီလူနာ ရှင်းခဲ့တဲ့ပိုက်ဆံ ငါးရာတန်လေးကို လက်ထဲကိုင်လို့ ကျွန်တော်တို့ကို ပြောလိုက်ပါတော့တယ် . . . . ။
၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁
Posted by သက်တန့်ချို at 2:49 PM
Labels: ကျွန်တော်နှင့်ဟောက်ဆာဂျင်ဘ၀, ရင်သို့ထိသောစာများ
PPNW October 25, 2011 at 6:15 PM
ဘေဘီ October 25, 2011 at 8:38 PM
အိုး... စဉ်းစားပြီးတော့ကြက်သီးထတယ်။ သူ့ ကိုယ်သူသေလို့ သေမှန်းမသိဘူးထင်တယ်။ သနားလိုက်တာ။
blackroze October 26, 2011 at 12:00 AM
စလာကတည်းက faith ဖြစ်နေတာ
I think it isawrong spelling - do u mean faint FHS ?
mstint October 26, 2011 at 10:33 AM
အဲ့ဒီလို ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်တွေ လောကကြီးထဲမှာ ဒုနဲ့ဒေးပဲနော်း) မောင်သက်တန့်ရဲ့ ဟောက်ဆာဂျင်ဘဝ အတွေ့အကြုံလေးက တကယ့်အမှတ်တရပါလားး)
စော(အဝါရောင်မြေ) October 27, 2011 at 10:59 AM
အင်း သူက လာနုတ်ဆက်တာ ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဝန်နဲ့ ဆုံးတာဆိုတော့ ပိုစိတ်စွမ်းအား ကောင်းလို့ ဖြစ်မယ်။
kiki October 27, 2011 at 8:14 PM
ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ အသည်းယားစရာကောင်းလိုက်တာ ...။
ဒါပေမဲ့ မယုံလို့ လည်း မရဘူး နော် ။အစွဲအလန်းတခုခုကျန်နေသေးရင် ဖြစ်တတ်တယ် ။ကိုယ်ယောင်လာပြတယ် ဆိုတာပဲပေါ့ ။
ဝိဥာဉ်အသစ်လေးပေမဲ့ စကားလည်းပြောတယ် ပိုက်ဆံလည်း ကိုင်သုံးတယ် ဆိုတော့ အတော် ဆီနီယာကျနေပြီထင်တယ် ။
အမတို့ အလှည့်တုံးကတော့ သူငယ်ချင်းတယောက် တွေ့ တာ.. မှင်စာသေးသေးလေးတွေ ကုတင်ကို ပတ်လည်ဝိုင်းပြီး ပြေးနေကြတယ် တဲ့ ။ဒပ်ဖရင် အေ ဆောင် မှာ နိုက်ဂျုတီကျတာ လေ။ တော်သေးတယ် ကိုယ့်အလှည့်မှာ ဘာမှ မတွေ့ လိုက်ရ လို့ ။နို့မို့ဆို ငုတ်တုတ်ထိုင် မေ့ ကိန်းပဲ.. ..း))
ခင်တဲ့ မကိ ။
ဒုတ်ိယလူ October 28, 2011 at 12:32 PM
သူ တစ်ကယ်ဗိုက်စာလို့ ဖြစ်မယ်း)